ပရိသတ်တစ်ဦးနဲ့အတူ သီဆိုဖျော်ဖြေရင်း စင်အောက်ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ လေဒီဂါဂါ
လက်စ်ဗီးဂက်စ်ဖျော်ဖြေပွဲမှ မတော်တဆမှု ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေ စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် လေဒီဂါဂါတစ်ယောက် လက်စ်ဗီးဂက်စ်ဖျော်ဖြေပွဲအတွင်း ပရိသတ်တစ်ဦးကို စင်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပြီး အတူတကွ သီဆိုဖျော်ဖြေစဉ် စင်အောက်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
လေဒီဂါဂါက ဂျက်အမည်ရှိ အမျိုးသားပရိသတ်တစ်ဦးကို စင်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး သူမကိုပွေ့စေကာ သီဆိုဖျော်ဖြေစဉ် ပရိသတ်က ဟန်ချက်ပျက်ခြေချော်ပြီး နှစ်ဦးလုံးဖက်လျက်သား စင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ လေဒီဂါဂါနဲ့ အဆိုပါ ပရိသတ်တို့က Million Reasons သီချင်းကို ဆက်လက် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အများကြီး ချစ်ကြတယ်လေ၊ ဒီ တစ်ကယ့်တလွဲ စင်ပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့တယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖက်လျက်သားကြီးပြုတ်ကျခဲ့တာ၊ ကျွန်မတို့က တိုင်တန်းနစ်ဇာတ်ကားထဲ ဂျက်နဲ့ရို့စ်လိုပေါ့ရှင်၊ ဒါပြီးရင်တော့ ကျွန်မတို့ လက်ဖက်ရည်သောက်သင့်တယ်" လို့ လေဒီဂါဂါက ပြောပါတယ်။
စင်ပေါ်မှပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ လေဒီဂါဂါဟာ နာတာရှည် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်တဲ့ fibromyalgia ရောဂါရှိသူဖြစ်တာကြောင့် သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေက အစိုးရိမ်ပိုခဲ့ကြပါတယ်။ လေဒီဂါဂါဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က တင်ပါးအရိုးဒဏ်ရာကြောင့် သူမရဲ့ Born This Way ဂီတဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာသပတေးနေ့ (အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်) ညက လက်စ်ဗီးဂက်စ်မှာ စင်ပေါ်ကပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့ လေဒီဂါဂါက အရေးမစိုက်ခဲ့ဘဲ သူမရဲ့ပရိသတ်ကို စိတ်သက်သာရာရစေခဲ့ပါတယ်။
စင်အောက်ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ လေဒီဂါဂါကို လုံခြုံရေးတွေက ကူညီတွဲထူပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ "အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒီ တစ်ကယ့်တလွဲ စင်မြင့်အတွက် ကျွန်မတို့ လှေခါးတပ်ထားဖို့လိုတာတစ်ခုပဲ အဆင်မပြေတာ၊ လှေခါးသာတပ်ထားရင် ကျွန်မ ထိန်းနိုင်သေးတာပေါ့" လို့ လေဒီဂါဂါက ပြောပါတယ်။
မတော်တဆ စင်ပေါ်ကနေ အတူပြုတ်ကျပြီးနောက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ ငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့ သူမရဲ့အမာခံပရိသတ် ဂျက်ကိုလည်း လေဒီဂါဂါက နှစ်သိမ့်စကားဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ "မစိုးရိမ်ပါနဲ့၊ အားလုံးကောင်းပါတယ်၊ ဒါက မင်းအမှားမဟုတ်ပါဘူး၊ မင်း ငါ့ကို တစ်ခုခု ကတိပေးနိုင်မလား? ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာကို မင်း အခုပဲ မေ့ပစ်လိုက်နိုင်မလား?" လို့ လေဒီဂါဂါက ဂျက်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
လေဒီဂါဂါ Lady gaga